HYADES MOUNTAIN RESORT - CHALET - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguStefanos
I-Hyades Mountain Resort ibekwe kumda wesithili esisezantsi seTrikala Corinthias kumphakamo weemitha ezili-1100. Ngombono omangalisayo weGulf yaseCorinthian kunye nakwimithambeka yeNtaba iZiria esasazeke phakathi kwee chalets ezisixhenxe zaseFinland 3000 herb.
I-Hyades Mountain Resort ibekwe kumda wesithili esisezantsi seTrikala Corinthias kumphakamo weemitha ezili-1100. Ngeembono ezimangalisayo zeCorinthian Gulf kunye namathambeka eNtaba iZiria asasazeka phakathi kwama-chalets asixhenxe aseFinnish 3000 imifuno.
Isiqingatha nje seyure ukusuka kwisiphithiphithi sase-Athene, isiqingatha seyure ukusuka elwandle iXylokastro kwaye kumgama wokuhamba kwiziko lezemidlalo-ski yaseZireia ibonelela ngobunewunewu bokuzola obusinika ngesisa ubume bamaGrike bamaxesha amane.
Yenziwe ngokupheleleyo kwizinto zendalo, iinkuni zaseFinnish kunye nelitye, liqukethe izindlu ezisixhenxe ezizimeleyo ezinikezela iindwendwe imvakalelo ekhethekileyo yokufudumala kunye nokuzimela. Iindwendwe zinokukonwabela ukuphumla kwindlu ye-bbq yoluntu kunye nelobby elitofotofo.
Yiva inkcubeko yeHyades Mountain Resort kunye nengqalelo kwiinkcukacha ezenza ukuba ibe yodwa kwaye ithandeke. Baleka, phumla, wonwabe, mamela izandi zendalo ozilibeleyo kwasebuntwaneni bakho okanye awuzange uve kude kube ngoku!
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1
Inombolo yomthetho: 1247K91000258600